Ezikiel 31 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
A ga-ebibi Ijipt bụ́ nnukwu osisi sida (1-18)
31 N’abalị mbụ, n’ọnwa atọ, n’afọ nke iri na otu,* Jehova gwara m okwu ọzọ, sị: 2 “Nwa nke mmadụ, gwa Fero eze Ijipt na ìgwè ndị so ya, sị,+‘A bịa n’ịbụ onye ukwu, è nwere onye gị na ya hà? 3 Ị dị ka onye Asiria, dịrịkwa ka osisi sida dị na Lebanọn,Nke alaka ya toro ogologo, maa mma, rujuo akwụkwọ, bụrụkwa ndò. Elu ya rukwara eluigwe. 4 Mmiri mere ka o buo ibu. Mmiri miri emi mere ka o too ogologo. Mmiri gbara ebe a kụrụ ya gburugburu. Mmiri na-asọpụta ebe ahụ na-eru ebe osisi niile dị n’ọhịa dị. 5 Ọ bụ ya mere o ji too ogologo karịa osisi ndị ọzọ niile dị n’ọhịa. Ọ wara ọtụtụ alaka, ngalaba ya tokwaara na-agaN’ihi nnukwu mmiri dị n’iyi ndị gbara ya gburugburu. 6 Nnụnụ niile kpara akwụ́ n’alaka ya. Anụ ọhịa niile na-amụ ụmụ n’okpuru alaka ya. Mba niile hiri nne na-ebikwa na ndò ya. 7 Ọ bịara maa mma dị egwu, alaka ya etookwa ezigbo ogologo,N’ihi na ọ gbanyere mgbọrọgwụ ná nnukwu mmiri. 8 E nweghị osisi Sida dị ka ya n’ubi Chineke.+ E nweghị osisi junipa alaka ya yiri nke ya. E nweghịkwa alaka osisi plen dị ka alaka ya. A bịa ná mma, e nweghị osisi ọzọ yiri ya n’ubi Chineke. 9 M mere ka ọ maa mma, meekwa ka o nwee ọtụtụ alaka. Osisi ndị ọzọ niile dị n’Iden, bụ́ ubi ezi Chineke, nọ na-achọsi ike ịdị ka ya.’ 10 “N’ihi ya, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, sị: ‘Ebe ọ bụ na o* toro ogologo, elu ya eruo n’eluigwe, ogologo o toro ana-ebukwa ya isi, 11 m ga-enyefe ya n’aka onye ọchịchị dị ike nke na-achị mba dị iche iche.+ Ọ ga-emerịrị ya ihe. M ga-ajụkwa ya n’ihi ajọ omume ya. 12 Ndị mba ọzọ, bụ́ ndị obi kacha fee azụ ná mba niile, ga-egbutu ya. Ha ga-ahapụkwa ya n’elu ugwu. Akwụkwọ ya ga-adasa na ndagwurugwu niile. A ga-agbajikwa alaka ya, ha adasa n’iyi niile dị n’ụwa.+ Ndị niile nọ n’ụwa ga-esikwa na ndò ya pụọ hapụ ya. 13 Ya daa, nnụnụ niile ga-abịa biri n’ogwe ya. Anụ ọhịa niile ga-anọkwa n’alaka ya.+ 14 Ihe a mechaa, a gaghịzi enwe osisi ọ bụla dị nso na mmiri nke ga-eto ezigbo ogologo ma ọ bụ nke ga-adị elu ruo eluigwe. A gaghịkwa enwe osisi mmiri gbara gburugburu nke ga-etoru eluigwe. A ga-egbu ha niile, ha abanye n’ime ala, ha na ndị mmadụ, ndị na-abanye n’olulu.’* 15 “Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova sịrị: ‘N’ụbọchị ọ ga-abanye n’ili,* m ga-eme ka ndị mmadụ ruo uju. M ga-eji maka ya kpochie mmiri miri emi, meekwa ka iyi ya kwụsị ịsọ asọ, ka mmiri ya gharazie ihi nne. M ga-ejikwa maka ya mee ka Lebanọn gbaa ọchịchịrị. Osisi niile dị n’ọhịa ga-akpọnwụkwa. 16 M ga-eme ka mba niile maa jijiji ma ha nụ ụda ọdịda ya mgbe m ga-eme ka ọ banye n’ili,* ya na ndị niile na-abanye n’olulu.* A ga-akasikwa osisi niile dị n’Iden+ obi n’ime ala, ha na ezigbo osisi Lebanọn ndị kacha mma, nakwa osisi niile mmiri gbara gburugburu. 17 Ha esorola ya banye n’ili,* gakwuru ndị e ji mma agha gbuo+ nakwa ndị na-akwado ya,* bụ́ mba dị iche iche ndị biri na ndò ya.’+ 18 “‘N’osisi niile dị n’Iden, è nwere nke dị ebube ma dị ukwuu ka gị?+ Ma, a ga-egbutu gị na osisi ndị dị n’Iden, unu abanye n’ime ala. Gị na ndị a na-ebighị úgwù na ndị e ji mma agha gbuo ga-atọgbọ otu ebe. Ihe a bụ ihe ga-eme Fero na ndị agha ya niile.’ Ọ bụ Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru ihe a.”
^ Na Hibru, “i.”
^ Na Hibru, “nakwa aka ya.”